SiteCatalyst 15 na nyocha 10
Bọchị Sọnde, Machị 13, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị nwere ndị ahịa na-eji ma Omniture na Webtrends. N'ezie, ọ bụrụ na ị gụọ blog a, ị maara na Webtrends bụ onye ahịa. Nke ahụ bụ ngosi zuru oke ka m wee nwee echiche na-adịghị mma maka ihe…
M na kwuru tupu na nsogbu na ọtụtụ nchịkọta nyiwe bụ na ha na-enyekarị akụkọ, mana ha enweghị ikike iji anya ha gosipụta ozi ka ị nwee ike ịme ihe kwesịrị ekwesị mkpebi.
Nke a bụ mmelite kachasị ọhụrụ na SiteCatalyst Omniture 15 ngwaahịa dị ka esighachite site na vidiyo ha na-adịbeghị anya.
Webtrends Analytics 10 na-enye UI ohuru nke amachaghị nke ọma, nụchara anụcha ma dịkwa mfe ịnyagharịa. Ezubere UI maka ịpị na ịpị ihu na-enye ụzọ dị oke egwu iji lelee data gị. Njirimara onye ọrụ jiri thumbnails nye onyonyo nke ihe dijitalụ ị na-enyocha.
Webtrends na-ewebata Mpaghara - Oghere bụ ngwa ọ bụla, weebụsaịtị, ma ọ bụ ikpo okwu dịka ịchọrọ iji soro. Nke a nwere ike ịbụ ibe Facebook gị, weebụsaịtị gị, ngwa gam akporo gị, wdg. Oghere oghere na-ahazi profaịlụ. Profaili ogologo kemgbe a nnukwu atụmatụ na Webtrends, na-enye oké mgbanwe, ma ọ bịara na a na-eri - nzukọ. Ugbu a, profaịlụ snap to Spaces.
Mgbe ole John Nwoke hụrụ preview, ọ kacha mma best “Ọ dị ka Infographic!”. Echere m na nke ahụ na-agwa akụkọ niile… Nchịkọta Webtrends 10 agbanwewo karịa ịkọ akụkọ ma ugbu a, ọ na-egosipụta nke ọma n'ụzọ na-enyere ụlọ ọrụ aka ịme mkpebi.
“Anya dị ka infographic” abụchaghị otuto! 🙂
Ka osila dị, ngosipụta a n’akụkụ bụ ihe izizi m huru, daalụ maka ya.
Wouldnye ga-echeworị afọ ise gara aga na stodgiest nke stodgy (WT) ga-enweta ihe dị oke egwu. Ọzọ, “vis sexy” abụchaghị otuto.
Doug, M na-enwe olileanya na ị ga-delve n'ime abụọ ndị a ihu n'ihu… nghọta, arụmọrụ, mgbanwe ga-abụ ọkacha mmasị m eri. Ma ọ bụ ma eleghị anya, m ga-eme ya, ọ bụrụ na m nwere ike ịchọta oge. Sooo ọrụ.
Ma, ebe ọ bụ na ị na-edocha anya mgbe niile na nkọwa gị, ị ga-eche banye n'ime ihe Spaces ọzọ na post ọzọ ma nye mmeghachi omume gị. Ma ọ bụ tụọ aka na WebTrends bipụtara nke nwere uche ya.
Ndo ma ọ bụrụ na ọ dị m ka ọ na-agagharị, mana ọkwa gị na onyinye ndị ọzọ dị ezigbo mma ma baa uru, ọ dị mma.
CGrant, ọ dị mma na ị na-akwali !!! Re: Infographic, ejighi n'aka ebe nke ahụ nwere ike bụrụ ihe ọjọọ. Ihe omuma ihe omuma bu ihe ngosi nke na -ejuputa data ma gosiputa ya iche iji nye echiche nke na-agwa 'akuko' nke oma. Lelee ihe oyiyi abụọ ahụ dị n'elu above Kedu nke na-enye nghọta n'ime arụmọrụ na ebumnuche nke mmeghachi omume kpọmkwem na ibe a na-ekwu?
Ee, ka anyị banye n'otu ibe maka nkọwapụta.
N'eziokwu, ihe pụtara na infographic nwere ebumnuche nke ịkọ akụkọ ahụ nke ọma. Agbanyeghị, okwu a apụtakwala mmiri ozuzo ọ bụla nke nwere agba, onyonyo, igwe ojii okwu ma ọ bụ abụọ, ụdị mkpụrụedemede na agbanwe agbanwe na sel, gbakwunye ihe niile anaghị agbaso ntanetị dị mfe.
Ihe a na-akpọ “infographics” taa na-echetara m oge mbido laser na-ebi akwụkwọ mgbe mmadụ niile bidoro iji mpempe akwụkwọ na mkpụrụedemede mara mma mepụta nke ha.
Ya mere, ka anyị rapara na nsonaazụ dị mma, nke dị mma nke akara ngosi infographic metụtara ịdị mma ma ọ bụghị nkwanye ugwu ma ọ bụ ihe na-ewu ewu.
Ekwenyere m na cgrant. Webtrends tinyere oge dị ukwuu na-edozi “tebụl larịị na akụkụ na nha” nke esiri ike nke Webtrends 8 na tupu. Can nwere ike ịgwa ha na ha gbadoro anya na imelite ọhụụ a na-ahụ anya n'ihi na mbipụta ikpeazụ ha (9 na 10) ejiriwo nlezianya lebara anya. O doro anya na Webtrends 9 webatara nnukwu atụmatụ mbupụ data (REST API, wdg) mana n'echiche m, nnukwu mgbanwe bụ njirimara na-eche ihu onye ọrụ.
Nchịkọta 10 ọhụrụ a kachasị dị ọhụrụ bụ nke kachasị enwe mmekọahụ, na olile anya karịa. Otu atụmatụ ọzọ akpọtụrụ aha na Engage bụ na Peeji ọ bụla na akụkọ Pages ga-enweta dashboard nke ya - nke kwesịrị ịmasị ọkachasị, ma baa uru!
N'ezie, Nzukọ Omniture a n'izu a lekwasịrị anya na mgbanwe Webtrends na-atụlebeghị kemgbe tupu… Version 6? Ndabere usoro ngwụcha! Nwelite na SiteCatalyst 15 ga-abịa juputara na mgbanwe n'azụ ihe nkiri. Mgbanwe ndị a ga-enye ohere maka ụdị ikike ọhụụ ọ bụla na ngwaọrụ ahụ; ike Webtrends nwere ike na-arọ nrọ ruo mgbe ha kpebiri imelite ha nhazi Engine.
Otu n'ime mgbanwe ndị a - Nkesa ozugbo. N'ezie Google Analytics nwere ya ihe karịrị otu afọ ugbu a, mana ọ bụ oge Ngwaọrụ Enterprise jidere. Dabere na ọkwa ndị a na-eme na izu gara aga, ọ dị ka ụlọ Webtrends atụleghị ụlọ nrụpụta ma ọ bụ nkewa. Wantchọrọ ịgbakwunye Mmetụta ọhụrụ na akụkọ gị? Kpọtụrụ Onye nchịkwa gị, onye ka na-emekọ otu interface ahụ ọ na-arụ ọrụ maka afọ 4-5 ikpeazụ! Kpebie ma ị ga-enyocha ma ọ bụ naanị tinye ya na akụkọ na-aga n'ihu. Dinggbakwunye metrik na Omniture dị mfe dị ka ịpị-na-ịdọrọ, ọ dịkwa ka ọ ga-eme mgbanwe karịa - ekele maka ndozi azụ.
Maka ndepụta zuru ezu nke mmezi Omniture na SiteCatalyst na Version 15, lelee isiokwu Adam Greco: http://adam.webanalyticsdemystified.com/2011/03/09/welcome-to-sitecatalyst-v15/
Cheta na obughi ikpe akwukwo site na mkpuchi ya. Naanị n'ihi Webtrends nwere ihu ọma ihu peeji dashboard apụtaghị na ọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ na-arụ ọrụ.
Njikọ Webtrends 'Social and Mobile Integration? Ugbu a na sh * t dị jụụ!
Isi ihe dị iche n’etiti webtrends na Omniture, bụ etu esi echekwa data. Na Webtrends ị na-enyocha logfiles na data akụkọ ahụ echekwara na faịlụ ochie dị larịị.
Na Omniture ị na-echekwa data na DB njikọ. Methodszọ abụọ a nwere uru na ọghọm.
1. Na webtrends ị nwere ike ịghachite data gị. Nke a na-enye aka n'ụzọ dị ukwuu n'ọtụtụ ụzọ. You nwere ike ịnwale ntọala ma ọ bụ mgbanwe gị na ntọala gị ngwa ngwa, ịnwere ike ịtọlite ​​akụkọ ọhụụ ma hụ na oge, ma ọ bụrụ na ewughị ha na usoro omenala. Omuma bu ntinye paghe site na izo aka na peeji, mana enwere otutu ihe omuma atu mere nka ji di nma. Otú ọ dị ebe ọ bụ na Webtrends anaghị agba ọsọ na DB mmekọrịta, ịnweghị ike "Jụọ" db ahụ, na ihe ọ bụla ịchọrọ. Havekwesịrị ịkọ akụkọ ahụ na nyochaa data ahụ.
2. Na Omniture ị nwere ike “ịjụ” data dị ndụ, n’ihi na ị na-eji DB njikọ. Nke a na - enye ohere maka Discovery VS Site Catalyst live nkewa. Nke a pụtara na ịnweghị ike ịtụgharị data gị, yabụ ule na-esiri gị ike karị ma ị na-enwe nsogbu na-anwa ịlele ihe azụ n'oge, na ịtọbeghị. Ọzọkwa a relational DB has ókè maka otú nnukwu datafiles ọ nwere ike ijikwa, otú na-emekarị (na m na ọ dịghị Omniture ọkachamara, ya mere, gbazie m) mgbe na-aga n'elu a ole na ole narị puku bịara, Omniture “samples” data zere ara ajụjụ ibu oge. Nke a na-eweta nsogbu mgbe ịchọrọ inweta data ziri ezi na ọ bụghị ihe nlele nke data. Nkebi ndụ dị ezigbo mma ma ọ bụrụ na Webtrends ga-ọ dịkarịa ala mee ka o kwe omume iji ngalaba ahụ na nyocha Webtrends, mgbe ịzụrụ ngalaba (Chọpụta ibe nke Webtrends)
Ihu ọma, ihe niile Live nkewa bụ n'ezie, na-enyocha nzacha dabere na ndepụta nke NJ kuki. Ọ bụ ezie na Webtrends nchịkọta nwere ike ọ gaghị enwe ike ịme nke a ngwa ngwa na Nchịkọta 10, n'ihi DB na-enweghị njikọ, ha nwere ike ịba ọfụma na ike iji ngalaba onye ọrụ ọ bụla site na ngwa "Akụkụ" ha dịka nzacha maka akụkọ ọ bụla na Webtrends. N'ezie ị nwere ike ime nke ahụ, mana ọ ga - achọ ka ị bupu Segmentt nke ị họọrọ ma jiri aka mee nza na NJ kuki niile dị na ya ma jiri ya dịka ntinye naanị.
Yabụ, enwere uru na ọghọm nke ntọala abụọ. Ọ bụ mkparịta ụka na-adọrọ mmasị, nke onye kwesịrị ịhọrọ.
Amaghị nke ọma ma ọ bụrụ na ị maara maka Webtrends Visitor Data Mart - ọ na-agbanwe faịlụ ndị ewepụghị site na nchịkọta gaa na njikọ data metụtara mmekọrịta nke ị nwere ike iji maka ajụjụ ad-hoc ma ọ bụ ọbụlagodi maka nkewa-site-na-fly site interface. Ọ bụrụ na m ga-atụnyere, ọ na-arụ ọrụ ma na-agbanwe karịa ngalaba na Google Analytics na Site Catalyst. Onye nleta Data Mart bụ “ihe mgbakwunye” na nchịkọta nke mere na ị ka nwere otu njirimara onye ọrụ, otu njikwa wdg.Eche m na nke a bụ ụzọ kachasị mma maka ị nwere ike isi jiri faịlụ ewepụghị nke kachasị maka akuko (dịka enweghị sampling) yana njikọ data njikọ maka nkewa na oru ndi ozo di “na ntanetị”.
Amaara m VDM & ngalaba nke ọma, mana a ga-ewughachi akwa ahụ na nchịkọta. Nweghị ike ịlele taa dịka ọmụmaatụ ndapụta ntụgharị gị, nyocha ụzọ gị, mkpọsa mkpọsa gị ma ọ bụ akụkọ nyocha ọ bụla ndị ọzọ na Webtrends Analytics for a Segment kọwara na ngalaba & VDM.
N'ezie, enwere ike ịmekọrịta njikọta ahụ n'ụzọ dị mfe, site na ịgbakwunye nzacha dabere na ndepụta nke NJ kuki site na Ngalaba. Yabụ ka anyị chee na ị wuru ngalaba na VDM & ngalaba. Akụkụ ahụ bụ ndị ọbịa niile na ebe nrụọrụ weebụ na-akwụ ụgwọ kwa afọ karịa 100.000 $ ndị bụbu ndị ahịa, mana ndị na-enweghị nkwekọrịta ezumike nka na ndị pịrị apị mgbasa ozi gbasara ụgwọ ezumike nka n'ime ụbọchị 30 gara aga.
Wantchọrọ ịhụ ụdị peeji nke Nke a na-ahọrọ, otu ha si agabiga onye na-azụ ahịa flash flash na ebe ha si apụ na ntanetị weebụ ha. Ugbu a, nke ahụ agaghị ekwe omume. Nwere ike iru ngalaba ahụ, mana ịnweghị ike iji ngalaba ahụ na nchịkọta yana nzacha. Ihe ị ga-achọ n'ezie bụ ụdị NJ kuki ahụ na-ebupụ site na Ngalaba ma kee dị ka nyo na voila, ị ga-enwe akụkọ gị.
Nke ahụ bụ isi njirimara m ga-agbakwunye, ọ bụrụ na m nwere ike ikpebi. Akụkụ ka bụ ngwaahịa dị ịtụnanya yana nghọta kpụ ọkụ n'ọnụ. Mana ịkwesịrị ịnwe ike iweghachi akụkụ ahụ n'ime usoro nyocha gị.
Ya mere, gbasara mma-ness. Na-ele anya na nke ọ bụla, m ga-asị na WebTrends ndị na-emepụta mere nhọrọ ka mma banyere ihe ị ga-enwe na oghere mmeghe… ọ bụ ezie na ọ ka nwere ike ịka mma. Ọ bụrụ na m nwere naanị ihu ndị a iji gosipụta njikwa, WebTrends ga-ewepụta mkparịta ụka ka mma ma rụpụta ajụjụ ndị akọwapụtara maka nyocha ọzọ.
The WebTrends otu ga-emekwa ka mmetuta ka mma na njikwa. Amaja m na-ekwu na gị nkezi management onye na-dị nnọọ ka wowed site trendy ihu dị ka ha bụ ndị na ezi data?
Hmm, okwu m nke abụọ gosipụtara ngosipụta mbụ m kwuru na nyocha a. Ekwesịrị ịgụ ha na usoro isi ala.
Ọ bụrụ na enwere otu ihe ị na - enweghị ike ibo Webtrends ebubo, ọ bụ enweghị mgbanwe. Ọ dịlarị ngwa ọrụ kachasị agbanwe.
Echere m na Omniture na-efunahụ igwe ndọrọ ego.
Nwere ike ịhụkwu nyocha 10 na http://www.Webtrends.com/analytics10
Ana m atụ anya ya.